Semalt: Votoatin'ny Content. Fomba hahitana hoe iza no mangalatra ny votoatinao
Raha mpitoraka blaogy ianao na mpanoratra tantara, fantatrao ny zava-drehetra momba ny votoatin'ny tranonkala. Mariho fa ny tranokala votoaty dia afaka manapika na mangalatra ny votoatin'ny tranokala ho an'ny bilaoginy tsy misy fahazoan-dalana. Ny sasany amin'ireo votoaty ao anaty votoaty dia mamaky sy mametaka lahatsoratra ao amin'ny blaoginao foana, raha mampiasa ny programa maody mba haka votoatin'ny fehezin'ny RSS ary hamoaka izany amin'ny tranonkalany manokana - lost super search form. Eto izahay dia hamaritra ny fomba hahafantarana hoe iza no mangalatra ny votoatin'ny Internet ary inona no fepetra tokony horaisinao amin'izy ireo.
Ahoana no hahalalanao fa voasakanana ny tranonkalanao:
Raha tsy mikaroka ny lohateninao ianao ao amin'ny Yahoo, Bing na Google dia tsy azonao atao ny mamantatra ireo tranonkala izay mangalatra ny votoatinao tsy tapaka. Raha te hahafantatra momba ireo mpampiasa spam ianao dia mety hanandrana ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto.
Io no fomba tsotra indrindra sy tsotra indrindra hahitana hoe iza no mangalatra ny votoatin'ny Internet. Ity programa ity dia ahafahanao miditra ao amin'ny URL an'ny votoatin'ny tranonkalanao ary mahita ny kopia ao amin'ny World Wide Web. Azonao atao ny mampiasa ny maimaimpoana maimaimpoana amin'ny safidy voafetra na ny dikan-drakitra avo lenta izay ahafahanao manamarina pejy 10 000 eo ho eo ho an'ny vola kely vitsy.
Azonao atao ihany koa ny manandrana ny trackbacks amin'ny tranokalanao WordPress mba hamantatra sy hikotika ireo tranonkala izay mangalatra ny votoatinao saika isan'andro. Raha mampiasa Akismet ianao dia maro amin'ireo trackbacks no haseho ao amin'ny lahatahiry spam. Ny fanalahidy hamantarana sy hahazoana ny trackback dia ny hampidirana ny rohy amin'ny lahatsoratrareo miaraka amin'ny lahatsoratra lehibe momba ny vatofantsika. Ny fifandraisana anatiny sy ivelany dia zava-dehibe ho an'ny tranokala fanatsarana.
Fomba iray hafa ahafahana mikirakira votoaty dia amin'ny fampiasana fitaovana webmaster. Mandehana any amin'ny tranokala> Rohy ao amin'ny kaonty Google Analytics ary kitiho ny tsanganana Linked Pages. Ny tranonkala iray izay nampifandray ny hafatrao dia hiseho eto amin'ity faritra ity. Raha te hahita ny rohinao manokana ao amin'ity tranonkala ity ianao, dia mila mamintina fotsiny ny sehatra ianao ary mahita ny antsipiriany izay nangalan'ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkalanao hatramin'izao.Eto dia ho hitanao fa tena mendrika ny kopia izy ireo ary mametraka ny lohateninao sy ny votoatinao amin'ny andavanandro.
4. Fampitandremana Google:
Raha tsy namoaka lahatsoratra tsy tapaka ianao ary miezaka ny hanohy ny fanamarihana ireo lahatsoratra amin'ny blôginao na lahatsoratra amin'ny tranonkala hafa dia tsy maintsy mamorona alijo Google ianao amin'ny fampiasana ny lalao marina amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra anao amin'ny ampidiro ao amin'ny teny fanamarihana.
Mitadiava vola ho an'ny soratra sokitra:
Raha namorona tranonkala WordPress ianao dia tokony hanandrana ny plugin RSS footer. Izany dia mamela ny mpampiasa mametraka ny ampahany manokana amin'ny lahatsoratrao any ambany na ambony amin'ny votoatin-tsakafo RSS. Ary raha tsy manana tranonkala WordPress ianao dia tokony hampidirinao fotsiny ny famaritana fohy na fanamarihana amin'ny farany ambany na ambony amin'ny votoatiny izay ahitana ny fampahalalana mitovy amin'izany ary tokony hotsaraina araka ny tokony ho izy.
Ahoana ny fijanonana ny fanalana ny votoatiny?
Raha tsy te hangalatra na hanaparitaka ny votoatin'ny Internet ianao dia tsy maintsy misy fepetra vitsivitsy. Voalohany indrindra, tokony hifandray amin'ny mpitantana ny tranonkala ianao ary angataho izy handrodana ny pejy izay kopian'ny tranonkala misy anao. Azonao atao ny mandresy lahatra azy hisambotra azy ireo avy hatrany.
Raha tsy misy fomba ahafahana manatona mpandrindra, dia tokony hanao ny Lookup ianao mba hahitana hoe iza no tompon'ity tranonkala ity na ny anaran'ny sehatra. Raha tsy voasoratra anarana manokana, dia ho hitanao mora foana ny adiresy mailaka administrateur. Azonao atao koa ny manatona an'i GoDaddy na HostGator ary mampahatsiahy azy fa ny tranonkala na ny anaran'ny sehatra misy fanontaniana dia mangalatra foana ny votoatin'ny tranonkalanao ary tokony hesorina na atomboka avy hatrany.
Last but not least, afaka mitsidika ny DMCA ianao. Tokony hampiasa ny tolotra takelaka ahafahanao manala sary, horonan-tsarimihetsika, bilaogy ary votoaty voarainao. Misy Plugins WordPress sasany izay mampiditra ny marika famantarana ny DMCA, ary azonao atao ny mametraka azy io ao amin'ny tranonkalanao mba hampitandrina ireo hackers sy mpangalatra mety.